Yakanakisa VTN HTN Series Yakamisikidzwa LNG Kuchengeta Matangi Mugadziri uye Fekitori | BTCE
VTN HTN Series Yakamisikidzwa LNG Kuchengeta Matangi
BTCE VTN kana HTN yakatevedzana LNG matangi ekuchengetera akagadzirirwa LNG (Liquefied Natural Gasi), iyo yakamira (VTN) kana yakachinjika (HTN) yekuchengetera tangi ine vacuum perlite kana super insulation.
BTCE VTN kana HTN yakatevedzana LNG matangi ekuchengetera akagadzirirwa LNG (Liquefied Natural Gasi), iyo yakamira (VTN) kana yakachinjika (HTN) yekuchengetera tangi ine vacuum perlite kana super insulation. Matangi anowanikwa ane hunyanzvi kubva pa5 m³ kusvika pa100m³ ine yakanyanya kubvumidzwa kumanikidza kushanda kubva pa8 kusvika ku17 bar uye akagadzirwa zvinoenderana neChinese kodhi, AD2000-Merkblatt, EN kodhi, 97/23/EC PED (Pressure Equipment Directive), ASME kodhi, Australia. /New Zealand AS1210 nezvimwe.
■ VTN /HTN LNG akatevedzana cryogenic matangi akagadzirwa zvinoenderana neyese LNG zvinodiwa zvekuchengetedza, nyore uye hupfumi kushanda. Zvizhinji zvezvimiro zvakabatanidzwa mupedyo.
■ Kugamuchirwa kwehunyanzvi hwekusimbisa tekinoroji, kuchengetedza 30% yesimbi
■ Proprietary insulation layer inotsigira dhizaini dhizaini, kuderedza kupisa kwekushisa kuderedza chiyero chemazuva ese evaporation, uye inogona kumira zvakanyanya kudengenyeka kwenyika, yakakunda nyika patent (patent Number: ZL200820107912.9);
■ Chigadziko chekunze chakagadzirwa nesimbi yekabhoni, uye nzvimbo dziri nyore kukuvadza pendi mukusimudza, kutakura uye kushanda dzinodzivirirwa nesimbi isina tsvina kuti ive nechokwadi chehupenyu hwebasa uye kunaka kwepende;
■ Mapuleti ese epombi anobuda nesimbi isina simbi, ayo anogona kudzivirira pombi kuomesa goko kubva pakudzika kwetembiricha inoputika uye kukuvadza pendi panguva yekushandiswa.
■ Yakakwenenzverwa perlite yekuzadza uye yekuvharisa zvinhu inomonereka maitiro kuti ive nechokwadi chekudzivirira chirinani mhedzisiro ye insulation layer;
■ Ivhavha yekushanda inogadzirisa uye iri nyore kushanda nekuchengetedza;
■ Mavharuvhu akabatana nevacuum ese zvikamu zvinounzwa kunze kwenyika kuti ave nechokwadi chehupenyu hwevacuum uye kuvimbika;
■ Nzvimbo yekunze yetangi yakaputirwa nejecha uye yakapfapfaidzwa neHEMPEL chena epoxy pendi yehupenyu hurefu uye aesthetics, yakaderedzwa nemwaranzi kupisa kutamisa uye kuderedzwa kwezuva nezuva kubuda.
Model Gross Volume (m3) Hurefu kana kureba(m) Diameter(m) NER LNG (% huwandu / zuva) MAWP(MPa)
VTN kana HTN 5 5 5 2.0 0.40 0.8~1.7
VTN kana HTN10 10 6.02 2.2 0.33
VTN kana HTN 20 20 10.2 2.2 0.27
VTN kana HTN 30 30 11 2.5 0.24
VTN kana HTN 40 40 9.9 3.0 0.22
VTN kana HTN 50 50 11.3 0.19
VTN kana HTN 60 60 13.2 0.19
VTN kana HTN 80 80 13.5 3.6 0.15
VTN kana HTN 100 100 16.3 0.14
Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. ndiyo yekutanga kugadzira matangi ekuchengetera LNG kuChina, uye ine kudyidzana kwepamhepo neyakakura pasi rose yeLNG yakasanganiswa kugadzira michina, Houpu Clean Energy Co., Ltd. uye Chongqing Naide Energy Equipment Integration Co., LTD. . Midziyo yedu inoshandiswa zvakanyanya mumakambani makuru emagetsi edzimba, akadai sePETROCHINA, Sinopec, China Gasi, nezvimwewo, ichiteverwa nevanobatanidza kuwedzera bhizinesi rekunze, zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa muEuropean Union, Southeast Asia nyika.
Zvakanakira kushandisa LNG zvigadzirwa zvekambani yedu zvinosanganisira:
1. Gadzira yepamusoro pearlite isu pachedu. Kuti ive nechokwadi chekuti tangi yekuchengetera ine yakanyanya nhanho yekupisa yekupisa mhedzisiro, kiyi yekuzadza zvinhu muvacuum layer ye tank rekuchengetedza pearlized jecha inogadzirwa yega uye inopihwa, uye inyanzvi yekuputira choto inotengeswa kubva kuUnited States. Mukushambadzira kwemusika, mutengo wepearlite unowanzo kuverengerwa maererano nehuwandu. Kuti vawane purofiti yakakwira, vamwe vanogadzira pearlite vanowedzera pearlite kusvika pakakwirira, zvichikonzera kuderera kwakanyanya mukuita kwekudzivirira kwe pearlite. Kambani yedu inoshandisa michina yehunyanzvi uye tekinoroji yakagadzirwa pearlite, yakanyatso kudzora iyo pearlite yekuwedzera chiyero, kuve nechokwadi cheiyo yakakwana pearlite yekuwedzera coefficient uye application maitiro. Kubva pamudzi kuti tive nechokwadi chekushanda kwakanaka uye kwakadzikama kwekupisa kwekuchengetedza kwetangi rekuchengetedza kambani, mwero wezuva nezuva wekubuda mumhepo wakadzikira zvakanyanya pane zvinodiwa nenyika (kazhinji isingasviki 0.2%). chekushandisa uye kuwana zvirinani zveupfumi.
2. Kutsigira chimiro pakati pemidziyo yemukati neyekunze ine patented tekinoroji. Chirongwa chekutsigira pakati pemukati nekunze kwetangi rekuchengetedza zvakare tekinoroji yedu ine patent. Kuburikidza neiyo yakakosha simbi dhizaini tsigiro ine hunhu hweflat, nhete uye kureba, kupisa kwekushisa kufambisa pakati pemidziyo yemukati nekunze kwakadzikiswa, uye zvakare ine hunhu hwekutsigirwa kwakagadzikana uye hupenyu hurefu hwekuneta kwesimbi.
3. HEMPEL pendi inotengeswa kubva kuDenmark. Tangi yependi yemhando yakanakisa uye kuburikidza neyepamberi pendi maitiro kuti ive yakatsetseka tangi yepamusoro. Matangi ekuchengetedza anogona kuve akasimba, ane colorfast uye akakwira kuratidzira kuchiedza. Nemhando yepamusoro yependi uye yakanakisa kugadzirwa kwekuona kuderedzwa kwakanyanya kwekunze kupisa mwaranzi patangi.
4. Optimized pombi marongerwo uye dhizaini. Iyo dhizaini yedhizaini yekupinza uye yekubuda pombi inonzwisisika uye yakaedzwa kwenguva refu yekushandisa, iyo inoderedza zvakanyanya chizvarwa chemagetsi mukuita kweLNG kudzoreredzwa kwemvura. Uye mukuita kwekunwa kwemvura, inogona kuita basa rekutonhodza uye kuderedza kudzvanywa munzvimbo yegasi rekuchengetedza tangi. Iyo inoderedza zvakanyanya kuyerera kwekudzivirira panguva yekubvisa mvura uye inodzivirira kuumbwa kwemvura whirlpool panguva yekukurumidza kubviswa kwemvura. Inonzwisisika yekubuda dhizaini, dzivirira zvitoro zviviri panguva imwe chete kana iyo yemvura deflection chiitiko.
LNG Peak regulation station saiti
Zvakapfuura: Trailer Tangi yeCryogenic Liquid Gasi
Trailer Tangi yeCryogenic Liquid Gasi
Vertical Super Yakakura Kuchengetera Tangi
LNG ( Liquid Natural Gas ) Mafuta eMatangi eChikepe
Horizontal Super Large Storage Tangi